Nezvedu - Anping County Hangtong Wiremesh Co, Ltd.
KUSVIRA NYIKA HANGTONG WIREMESH CO, LTD inyanzvi mukugadzira,
kugadzira, kutsvagisa uye kugadzira zvigadzirwa zveaya mesh. Kambani yedu yakavambwa mu1996, anopfuura makore makumi maviri, HANGTONG yakava yakakurumbira brand mune waya mesh indasitiri. Nekugara kwedu tichigara nekubata kwepfungwa mu tekinoroji uye manejimendi, Isu tinoteedzera gwara mune ino ndima.
Yakachengetedzeka fenzi (358), Express nzira fenzi, Rail nzira fenzi, Airport airport, Sport munda fenzi, Insulation fenzi, Bindu fenzi, Palisade fenzi, Wakamanikidzwa pfumo.
Razor waya, Electrophoretic pendi razor waya, Barbed waya, Electrophoretic pendi yakavezwa waya.
Chenguva Yekudzingirira Series
Australia yakajairwa zvechinguva fenzi, Canada yakajairwa zvechinguva fenzi, Chain inobatanidza zvenguva pfupi fenzi, Kushambira kwechinguva fenzi, Chenguva chipinganidzo uye zvichingodaro.
Chain yekubatanidza fenzi, Hexagonal waya mesh, Gabion bhokisi, welded waya mesh, isina waya waya mesh
Fence Fence Series
Katuru pani, yemadziro emakwai, fenzi remabhiza, nezvimwe.
Kupisa kwakanyudzwa waya waya, Yakavezwa waya, Yakagadzirirwa waya, Kutema waya uye zvichingodaro.
A. Isu tine yepamusoro yepamusoro manejimendi system, ISO9001: 2008 uye CE certification management inogona kuita kuti mutengi wedu agutsikane nemhando yepamusoro yezvigadzirwa.
B. Kambani yedu ine zvishandiso zvakanakisa: Yepamberi yemagetsi electrophoretic pendi yekugadzira, Powder yakafemera mutsetse wekutsigira anticorrosive, inopisa yakanyikwa PVC coated mutsara, kungwara kwakakura waya welded waya mesh muchina, otomatiki inotonhora inouisa ndiro yemuchina kugadzira fosi post, uye zvakare ine michina yekukotama. , bhora yekuputika muchina wekuchenesa ngura, Injection purasitiki yemuchina wemarudzi ese ezvishongedzo zvefenzi, uye mamwe marudzi eaya waya mesh inogadzira muchina.
C. Nezve izvo zvakasvibirira zvinhu isu tese tinorongeka kubva kune inozivikanwa kambani, Iro simbi kubva kuSHOUGANG, BAOSTEEL.Powder kubva kuAZZONOBEL neDuPont, Electrophoretic coating pendi kubva kuNIPPON.Nekuvimbika uku zvinhu, kuve nechokwadi chedu yepamusoro zvigadzirwa.
D. Tine fekitori yebazi yekudhiraya waya, yakarongedzwa, iyo inogona kunyatso kudzora dhayamidhi ye waya uye mhando yema galvanized.
E. Kambani yedu ine vanopfuura gumi veinjiniya. Iva nekwanisi yakakwana kuR & D uye gadzira muzvigadzirwa zvedu pachedu. Mukudaro isu tinochengeta gwara redu mune ino indasitiri.
F. Kune vanopfuura zana zana revashandi vechikwata. Kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye sevhisi yepamusoro.
Yedu injinjini timu yakatsvagisa hunyanzvi hunyanzvi hwependi ye electrophoretic mu waya mesh zvigadzirwa mumakore achangopfuura. Chekutanga shandisa mu waya mesh indasitiri chigadziko pane yechinyakare inopisa yakadzika. Uye ndikawana iyo patent (No.ZL201220274870.4), Yakagadzirisa dambudziko rinoshatisa yemarara pane yekucheka chikamu. Iyi tekinoroji ine kurehwa kwechirevo mune waya mesh indasitiri.
Hangtong kubva kunheyo vagara vakachengeta vanofarira kugadzira uye kufanotaura kushambadzira semweya wedu wekusimudzira. Izvo zvinorara mumubatanidzwa wekuvandudza department uye department rekushambadzira. Kubva 1997, zvigadzirwa zveHungtong zvinotora chikamu chemusika wepasi rose. Iko kune hukuru huwandu hwema waya mesh zvigadzirwa zvave kutumira kunze kweEurope, MaAmerican, Australia, Middle East, Africa, maodzanyemba akadziva kumabvazuva kweAsia, nezvimwewo. Iyo yakasarudzika yakakosha inosangana zvikuru nekudikanwa kwevatengi vane mhando yepamusoro, kuchengetedzeka, runako uye kuiswa nyore
Hangtong vanhu vange vari kuita kwakanyanya kuedza kune wese mutsva mutengi uye havana kumbotsvaga chero shamwari yekare kweanopfuura makore gumi. Kuvimba nguva dzose kunotanga kubva pakubatana kwekutanga uye kugutsikana kunoratidzikawo mushure mekutanga sevhisi. Hunhu hwechokwadi uye kubatsirana zvakatinakira ndiko kushandira pamwe kwechigarire. Hangtong vanhu vachaita zvakanyanya kuedza kune ramangwana redu rakajeka.